Tsy misy karantina: misokatra ho an'ireo mpandeha vaksiny feno i Abu Dhabi
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany UAE » Tsy misy karantina: misokatra ho an'ireo mpandeha vaksiny feno i Abu Dhabi
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany UAE • Vaovao isan-karazany
Septambra 2, 2021
Dingana lehibe ity raha efa niomana handray ny EXPO 2020 ny UAE, Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix ary hetsika maro hafa manerantany mandritra ny volana ho avy.
Abu Dhabi dia nanala ireo fepetra takina amin'ny quarantine ho an'ireo mpitsidika vita vaksiny tanteraka.
Abu Dhabi dia manantena ny fitomboan'ny fangatahana fitsangatsanganana any amin'ny emirate.
Ny Etihad Airways dia niomana amin'ny fampivoarana ny dia any Abu Dhabi.
Ny governemanta Abu Dhabi dia nanambara ny fanesorana ny fepetra takiana amin'ny quarantine ho an'ireo mpandeha vita vaksiny rehetra tonga any amin'ny emirat avy any ivelany.
Ny Etihad Airways, ny kaompaniam-pirenen'i UAE, dia vonona amin'ny fanentanana amin'ny dia mankany Abu Dhabi taorian'ny fanambarana nataon'ny governemanta.
Ireo mpitsangatsangana vita vaksiny feno (miaraka amin'ny vaksiny nankatoavin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana) dia afaka tonga avy any amin'ny toeran-tany rehetra tsy mila kararantina. Ny mpitsangatsangana rehetra dia mitaky fitsapana PCR ao anatin'ny 48 ora aorian'ny fiaingany, fitsapana amin'ny fahatongavany ary fitsapana indray amin'ny andro voafantina arakaraka ny firenena nandehanan'izy ireo. Na izany aza, ny mpitsangatsangana tsy voamarina dia tokony hanaraka ny lalàna mifanaraka amin'ny toerana hiaviany.
Tony Douglas, Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny vondrona, Etihad, dia naneho hevitra hoe: Abu Dhabi. Manantena izahay fa hitombo be ny tinady amin'ny mpizahatany sy ny namana sy havana mitsidika manerantany. Izany dia hanome ny mponin'i UAE hahay handanjalanja kokoa sy hilamin-tsaina rehefa mandeha manerantany.
"Ny emirate dia nanolotra iray amin'ireo programa ara-pahasalamana tsara indrindra eran-tany hiarovana ny mponina amin'ny taha vaksiny avo indrindra, ary vahaolana arahin'antoka teknolojia toa ny fampiharana Al Hosn hiantohana ny fiarovana ny mponina sy ny mpitsidika.
“Dingana lehibe ity raha efa miomana handray ny EXPO 2020 ny UAE, ny Grand Prix Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi ary hetsika maro hafa manerantany mandritra ny volana ho avy.
“Miasa amin'ny toerana fitaterana 65 ny Etihad amin'izao fotoana izao miaraka amina fiaramanidina tanora indrindra sy maharitra indrindra eto an-tany. Manantena ny hitsena ireo vahininay ho any Abu Dhabi miaraka amin'i Etihad izahay hankafy ity toerana ity: firenena sy renivohitra ary tena reharehanay ny miantso ny tranonay. ”
Ny manidina miaraka amin'i Etihad dia tohanan'ny programa Etihad Wellness izay naseho mba hanampy amin'ny famerana ny fiparitahan'ny COVID-19. Etihad no kaompaniam-pitaterana an'habakabaka voalohany eran'izao tontolo izao nanao vaksiny feno ny ekipazy tao anatiny. Ny Etihad dia mitaky 100% ny mpandeha aminy ihany koa mba haneho fitsapana PCR ratsy alohan'ny hidirany hiarovana ny tontolo ivoho izay fantatra ankehitriny fa iray amin'ireo tsara indrindra eran'izao tontolo izao.
Ny zotram-piaramanidina dia nametraka programa fanadiovana sy fahasalamana be dia be ary mampihatra ny fenitra ambony indrindra amin'ny fahadiovana amin'ny lafiny rehetra amin'ny dian'ny mpanjifa. Tafiditra ao anatin'izany ny fikolokoloana, ny sidina ary ny fanadiovana lalina, ny fidirana, ny fizahana ara-pahasalamana, ny fiakarana, ny fahazavana, ny fifandraisan'ny ekipa, ny serivisy fisakafoanana, ny fidinana an-tsambo ary ny fitaterana an-tanety, sns.
Fisamborana ny fanahin'i Islandy amin'ny Reykjavik Vaovao ...
Mivoaka ny talen'ny Executive ho andro manerantany ho an'ny fizahan-tany any Mekong ...
Ny tongolobe manta manontolo izao dia tsaroana noho ny Salmonella
Tonga hatrany Afrika Atsimo i Seychelles
Ny sidina sidina mankany Etazonia dia misondrotra
Olona iray maty, maromaro naratra tao anaty fiara fitateram-bahoaka any Ouganda...
Ilay mahery fo momba ny fizahantany farany dia mampirehareha an'i Senegal Proud
Voarara ny fivarotana finday Samsung any Russia
Ny herin'ny fiarahamonina dia mamirapiratra amin'ny alàlan'ny IMEX America ...
Hikatso ny fiakaran'ny vidin'ny fiakaran'ny seranam-piaramanidina ...
Niverina teny amin'ny habakabaka ny South Africa Airways 23 septambra
Kanada dia nanambara ny fanitarana ny fandrarana ny sidina avy any India
VP vaovao momba ny varotra nambaran'ny iN2L
Sidina Geneva mankany New York amin'ny SWISS sy United...